Maxaa kafiican xulashooyinka ikhtiyaariga ah ama Forex? Xul oo ha khaldamin. | vfxAlert official blog
Maxaa kafiican xulashooyinka ikhtiyaariga ah ama Forex? Xul oo ha khaldamin.
Bilowga xirfad, ganacsatada badankood waxay weydiiyaan su'aal: maxaa la doortaa ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ama Forex? Xirfadleyda suuqa Forex uma tixgeliyaan inay lagama maarmaan tahay in si faahfaahsan loo barto sida calaamadaha ay ugu shaqeeyaan ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah , iyo kuwa cusub, waxay jecel yihiin fursadda ah inay dhaqso lacag ugu helaan xittaa dhigaal yar. Ikhtiyaar kasta wuxuu leeyahay faa'iidooyin iyo khasaarooyin labadaba.
Aynu ku bilowno qeexitaannada. Ikhtiyaar waa heshiis isweydaarsi caadi ah oo xaq u siinaya milkiilaha inuu ku iibsado hantida qiimo go'an kahor taariikh cayiman (dhicitaan). Ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah laguma ganacsado isweydaarsiga saamiyada; ereyga "laba-lab" macnaheedu waa laba natiijo oo keliya ayaa suurtagal ah: togan (faa'iido) ama diidmo (khasaaro). Dhowr sano ka hor, waxqabadka noocan oo kale ah waxaa loo yaqaan sharad maaliyadeed, hadda ereyga looma isticmaalo sababo la xiriira shatiyeynta. Xulashada sawirka:
Macaamil iibsi (BUY) wuxuu la mid yahay furitaanka ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah (CALL), ka soo horjeedka suuq hoos u dhacaya ayaa noqon doona ikhtiyaar PUT. Kuwani waa laba ikhtiyaar oo caadi ah oo loogu talagalay sida loo sameeyo ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ; dallaaliinta binary waxay lahaan karaan dalabyo dheeraad ah sida "Gudaha ka joog / ka baxsan" iyo "Taabashada / Taabashada heerka qiimaha".
Faa'iidooyinka iyo kala duwanaanshaha
Yaanan si faahfaahsan u eegin faa'iidooyinka hab kasta oo ganacsi, laakiin si fudud loo bixiyo miis isbarbardhig ah:
Dareenka ugu weyn ayaa la siin doonaa su'aasha, waa maxay farqiga u dhexeeya Forex iyo ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah, gaar ahaan tan, iyadoon loo eegin khibrad, ganacsatadu waxay sameeyaan khaladaad caadi ah:
1. Waxaa jira xulashooyin muddada-gaaban ah
Macaamilku wuxuu soconayaa 60 ilbiriqsi illaa dhowr daqiiqadood oo helitaanka faa'iido 70-90% waa fursad soo jiidasho leh. Laakiin dhab ahaan, waa wax aad u adag in lacag la helo - dhaqdhaqaaqyada sicirka ee xilliyada yar yar sida dhexdooda ah waa wax aan macquul ahayn in la saadaaliyo. Waxay noqon kartaa bood bood fiiqan ama dhaqdhaqaaq gaabis ah dhowr qodob. Xaqiiqdii, ganacsaduhu wuxuu isku dayayaa inuu qiyaaso isbeddelada suuqa fowdada sida isbadalka, sidaa darteed macaamil-sameynta muddada-gaaban way ku adag tahay bilowga.
2. Adeegsiga shax toosan
Jaantus khad ayaa badanaa lagu dejiyaa meheradaha internetka ee dillaaliinta, badiyaa marka loo eego. Laakiin way ku fiican yihiin kaliya xayeysiinta, waan arki karnaa dhaqdhaqaaqa qiimaha, laakiin iyagu kuma haboona ganacsiga. Si kastaba ha noqotee, ganacsatada horay uga ganacsan jiray lacagta ama suuqyada saamiyada ayaa inta badan joojiya isticmaalka jaantusyada laambadda, oo ganacsiguna wuxuu mar kale isu beddelaa "qiyaasa isbeddellada." Sidaa darteed, ha iloobin laambadaha shumaca iyo terminaalka MetaTrader, iyo websaydhka dallaalka, waxaan kaliya furaynaa heshiisyo.
3. Majiro tijaabo istiraatiijiyad ganacsi
Falanqaynta Newbie sida calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ahi u shaqeeyaan ; Nasiib darrose, waxaad dareemeysaa xayeysiinta "dhammaan aad u fudud" sidoo kale macno ahaan. Xaaladda caadiga ah - dhawr sano ka dib ganacsi Forex iyo falanqayn farsamo ka dib waxay bilaabmaysaa guji nacas ah "CALL / PUT" iyo dhaqso u luminta deebaajiga.
Ka dib markaad ka shaqeyso "istiraatiijiyad" noocan oo kale ah waxaa lagu soo gabagabeynayaa in ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah loo isticmaali karo, laakiin muddada fog waa uun casino. Laakiin aniga daa, maxaa yeelay Forex sidoo kale ma aha mid fudud sida qorayaashu ugu qancinayaan macaamiisha "istiraatiijiyooyin badan" oo si caadi ah ayaa loo arkaa? Haddii aad si dhab ah u qaadato xulashooyinka, macaashka ayaa la damaanad qaadayaa.
4. Wareejinta fudud ee istiraatiijiyadda shaqada
Khaladka caadiga ahi waa ka soo horjeedka kii hore, kaas oo aan lagu xisaabtamin marka laga beddelayo Forex - "fidinta" istiraatiijiyadda muujisay natiijooyinka wanaagsan ee xulashooyinka. Maxay tahay sababta calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ay been u yihiin? Jawaabtu waa fududahay - ma tixgelineyso waqtiga dhicitaanka (ficilka ikhtiyaarka).
5. Waqtiga xaddidan ee macaamilka
Xaaladda ugu weyn ee natiijada togan waa in si sax ah loo xisaabiyo waqtiga ay doorashadu furan tahay (dhicitaanka). Fahmidda tan markiiba ma imaaneyso. Forex waxay kuu ogolaaneysaa inaad boos furto ilaa intaad rabto, xiro waqti kasta, isticmaal heerarka Qaadashada Macaashka / Jooji oo deji amar sugaya. Ikhtiyaar ahaan, waxaas oo dhan maahan.
Xitaa haddii falanqaynta suuqa si sax ah loo sameeyo, maaraynta lacagta saxda ah way shaqeysaa, laakiin dhicitaanka waxaa lagu go'aamiyaa si khaldan waxaa jiri doona xoogaa khasaaro ah. Saamiyada iyo suuqa sarifka lacagaha qalaad, heerarka sicirka iyo markaa kaliya waqtiga ayaa muhiim ah, tani waa farqiga ugu weyn ee ka jira xulashooyinka binary, in kasta oo qiimaha u dhexeeya sidoo kale muhiim yahay. Marka u beddelo fikirkaaga sida ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan.
6. Maarayn lacag
Maareynta halista waa inay ku jirtaa istiraatiijiyad kasta, laakiin sharcigan waxaa si joogto ah ugu xadgudba ganacsatada. Maareynta lacagta sida loo sameeyo istaraatiijiyada ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa kaalin weyn ka weyn tan Forex maxaa yeelay waa wax aan macquul aheyn in la xiro boos hore ama xaalado aad u xun.
Tani waxay badanaa sabab u tahay xiisaha, taas oo sida ay noqotay; ikhtiyaarrada ayaa ka dhakhso badan Forex. Sheekooyinka xayeysiinta ee ku saabsan dakhliga degdegga ah isla markiiba ka dib marka la furo Deposit, awoodda si dhakhso leh looga magdhabo khasaaraha, iyo aaladda internetka lafteeda ayaa la mid ah mashiinnada mashiinnada oo siiya cawaaqib xumo xitaa ganacsatada khibradda leh. In Forex wax walba way ka sii fiican yihiin, waxaad si taxaddar leh u qorsheyn kartaa heshiiska xitaa haddii ay xoqeyso si loo dhigo heerarka faa'iidada iyo khasaaraha.
Si loo soo koobo, xaqiiqda kale ee muhiimka ah ee la tixgelinayo marka la dooranayo sababta calaamadaha loogu talagalay ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee aan ahayn suuqa Forex - ma jiraan wax faa'iido leh. Markuu la qabsaday, ganacsaduhu wuxuu bilaabayaa inuu si ikhtiyaari ah ugu halgamo tiro isku mid ah oo tobanaan badan ah isla markaana kala guurka kumanaan doolar illaa boqollaal qaadanaya waqti go'an. Sidaa darteed, markaad bilowdo inaad shaqeyso, marwalba xusuusnow in tani ay tahay suuq gebi ahaanba ka duwan oo si macquul ah u xisaabiya mugga macaamilka.